Kenya oo sheegtay inay dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Kenya oo sheegtay inay dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Saraakiil ka tirsan Booliska dalka Kenya ayaa waxaa ay sheegeen inay howlgal ku dileen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo ay uga shakiyeen inay doonayeen inay gudaha dalkaas ka fuliyaan weeraro Argagaxiso.
Sida uu baahiyay tv-ga Citizen oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan booliska ayaa sheegay in la dilay Saddex Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab xilli ay doonayeen inay burburiyan agabka isgaarsiinta ee deegaanka Tarbaj ee Magaalada Wajeer.
Sidoo kale Booliska waxaa ay sheegeen inay ku raad joogan xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo weli ku sugan degaano kale oo hoostaga Magaalada wajeer si ay weeraro qorsheysan u fuliyan,balse Ciidamada u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan.
Booliska Kenya ma shaacin magacyada Saddex Xubnood ee ka tirsan Ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay sheegeen inay dileen, balse ay sheegeen inay wadaan baarotano kale oo la xiriira halka ay ka yimaadeen raggaas.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ay weeraro kala duwan ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, iyaga oo burburiyay Anteenooyinka Xarumo kala duwan oo ay leedahay Shirkadda Isgarsiinta Safaricom ee laga leeyahay dalkaasi Kenya.
Previous articleMaxkamadeynta Rga loo heysto Shabaabnimo oo ka socota Gaalkacyo
Next articlePuntland oo Maanta xukun dil ah ku riday Rag ka tirsan Al-Shabaab